China 2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (2EO) / Fentacare 1202, CAS No. 1541-67-9 mveliso kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
I-CAS yeNombolo 1541-67-9
I-Dodecylamine polyoxyethylene ether 1201; Iarhente ye-Antistatic 1201; I-Laurylamine polyoxyethylene (01) i-ether 1201; Amine enamafutha polyoxyethylene ether
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, njenge-arhente ye-antistatic, isithambisi, njl., Isetyenziswa ngokubanzi kumalaphu, kwimicu yentsimbi, kulusu, kwintlaka, kwipeyinti nakwindawo zokutyabeka; I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, esetyenziswa njenge-emulsifier, iarhente yokufaka iinwele, njl., Kwicandelo leemveliso zokhathalelo lomntu; I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, esetyenziswa njengesithambisi, i-rust inhibitor, i-corrosion inhibitor, njl. I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, njenge-arhente yokusabalalisa, iarhente yokulinganisa, njl., Isetyenziswa kumalaphu, ukuprinta kunye nokudaya amasimi; I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, njengearhente ye-antistatic, njl., Isetyenziswe kwipeyinti yesitya; I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, esetyenziswa njenge-emulsifier, i-dispersant, njl. I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201, sisongezo esibalulekileyo sezitshabalalisi;
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201 ipakishwe kwi-170kg okanye i-200kg igubu le-Iron, igubu leplastiki le-20kg. 2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201 ivenkile kunye nezothutho njengeekhemikhali ngokubanzi. Ukugcinwa unyaka omnye kwigumbi elinomthunzi kunye nendawo eyomileyo. Ishelf life yonyaka omnye.
I-2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (1EO) / Fentacare 1201 yi-non-ionic surfactant, nikela ingqalelo kukhuseleko lwabasebenzi ngexesha lokusebenza. Kulumkele ukunxibelelana neliso nolusu, wakuba uqhagamshelene nawe, gungxula ngamanzi.